Sawiro+Dhageyso Odayaasha Dhaqanka Somaliyeed Oo Hogaan Cusub Doortay. – Calamada.com
Sawiro+Dhageyso Odayaasha Dhaqanka Somaliyeed Oo Hogaan Cusub Doortay.
calamada October 4, 2016 1 min read
Mas’uuliyiin katirsan Xarakada Al Shabaab oo uu kamid ahaa Sheekh Xuseen Cali Fiidoow ayaa kalimado ka Jeediyay munaasabadda waxayna dhaqanka soomaaliyeed ku bogaadiyeen in ay kaalin weyn ka qaadaan difaaca diinka iyo dalka.
Â Xaruntii munaasabadda ay ka dhaceysay waxaa kalimado ka jeediyayÂ odayaal dhaqameed xaadiray xaruntii shirka, guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ayaa waxaa loo magacaabay Samadoon Sheekh Ibraahim Sheekh Cali Nuur iyadoo afhayeenka odayaasha golaha dhaqanka soomaaliyeed loo magacaabay Nabadoon Ismaaciil Xuseen Haaruun.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 03-01-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Radio Andalus 04-01-1438 Hijri.